China MR5 Marble wokucwebezelisa Crystallizer ifektri abakhiqizi | Jinqiu
I-MR5 ngumkhiqizo wokunakekelwa wemabula owenziwe ngcono wokwenziwa kabusha kwesakhiwo noma ukupholishwa kwezindawo zemabula. Ingashesha ukulungisa imihuzuko eyakhiwe ebusweni bemabula ngokugqoka, ukubuyisela noma ukuthuthukisa isicwebezelisi sendawo.
I-MR5 ingumkhiqizo ojwayelekile wokuphinda usebenzise imabula, ukusetshenziswa njalo ngeke kushintshe ukubukeka kwemabula.
Ubuchwepheshe bokungena kwe-ion obunelungelo lobunikazi obuyingqayizivele benza indawo yemabula ecutshunguliwe ibe mningi kakhulu, iqinile futhi imelane nokugqokwa, futhi "ikhanye kodwa ingasheleli".
Umkhiqizo ungasetshenziselwa wonke amatshe aqukethe i-calcium carbonate ne-magnesium carbonate, njengemabula, i-limestone, imabula yokufakelwa ne-terrazzo.
Ukubukeka Uketshezi olumhlophe
Ukupakisha 4CANS / CTN
Isisindo 4.5KG / Can
Isicelo: Imabula, i-travertine, itshe lokufakelwa ne-terrazzo
I-MR5 ngumkhiqizo wokunakekelwa wemabula owenziwe ngcono wokwenziwa kabusha kwesakhiwo noma ukupholishwa kwezindawo zemabula. Ingashesha ukulungisa imihuzuko eyakhiwe ebusweni bemabula ngokugqoka, ukubuyisela noma ukuthuthukisa isicwebezelisi sendawo. Ukugcinwa njalo kungagcina ukukhanya okuhle isikhathi eside, futhi ngasikhathi sinye kwakha ungqimba lwe-crystal surface shiny, oluqinile. Ibuye isetshenziselwe ukugcina itshe lokufakelwa.
I-Crystallization iyindlela yokwenza kabusha isicwebezelisi samatshe aphansi kwe-calcium afana nemabula, i-limestone ne-travertine, ukwenza ngcono ubuso. Le nqubo ifafaza i-polishing crystallizer ngaphezulu kwaphansi futhi iyishaye isebenzisa umshini waphansi ngoboya bensimbi noma iphedi yokupholisha. Umshini ofakwe amapayipi ukhiqiza ukushisa nge-crystallizer, futhi kwakha inhlanganisela entsha phezu kwemabula, yalokhu, ukuvikela imabula ngokugcina umbala wayo ubuna nokugcina ukukhanya kwetshe. Isetshenziselwa ukuhlanza imabula yangaphakathi kuphela futhi kuzo zonke izigaba isesha ukusebenza kwayo njengasemahhovisi, ezitolo ezinkulu, ezakhiweni zomphakathi, emakhaya kanye nasemahhotela.
Hlanza phansi bese uyomisa.
Nyakazisa ikani ngaphambi kokusetshenziswa.
Thela okuncane kwe-MR3 phansi (5-10ML / m2)
Kufakwe amapayipi aphansi wombala omhlophe noma uboya bensimbi emshinini waphansi (Speed ​​175rmp, noma 154rmp).
Bhuqa ngomshini wokupholisha kuze kube yome phansi.
Phinda ukusebenza kwe-3-5 isinyathelo kuze kube yilapho ubuso buqina futhi bukhanya.
Uma usebenzisa okokuqala, udinga ukuphinda izikhathi ezi-2 ukuya kwezi-3 ngokujwayelekile.
Hlanza uthuli nge-mop lapho ukusebenza kuphelile. Isondlo kupholisha isikhathi esisodwa kuphela kulungile.
Langaphambilini MR3 Imabula Yokucwebezela I-Crystallizer
Olandelayo: ISINYATHELO SESINYATHELO seCrystallizer fafaza iN 'BUFF -2501
Imabula Yokucwebezelisa Imabula
I-crystallizer yemabula ne-terrazzo phansi -AG ...
I-MR2 Imabula Yokucwebezela Imabula
ISINYATHELO SESINYATHELO seCrystallizer fafaza iN 'BUFF -2501
MR3 Imabula Yokucwebezela I-Crystallizer